आंकडाको बारेमा चिन्तित? BMI गणना गर्न प्रयास गर्नुहोस्
शरीरको सामूहिक सूचकांक अधिक वजनको उपस्थिति निर्धारण गर्न विश्व-ज्ञात प्रविधि हो। सरल सूत्रको मद्दतमा, विशेषज्ञहरूले शरीरको वजन र मानव विकासको आधारमा बीएमआई गणना गर्ने प्रस्ताव राख्छन्। धेरै मानिसहरूको लागि, यो प्रविधिले यो निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ कि उनीहरूको वजन कम हुन्छ, जसले स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्छ र मधुमेह, हाइपरटेन्सन, गठिया र क्यान्सर ट्यूमरहरूको विकासको जोखिम बढाउँछ।
जसको लागि यो प्रविधि प्रभावी छैन? पेशेवर एथलीटहरूको लागि (घनी मांसपेशी जनको उपस्थिति), बालबालिका, गर्भवती र लापरवाही आमा, साथसाथै एक कमजोर शरीरको साथका पुराना व्यक्ति। बच्चाहरु को लागी, एक अलग वर्गीकरण विकसित भएको थियो, र सबैले आफ्नो वजन को मूल्यांकन गर्न अन्य तरिकाहरु को प्रयास गर्नु पर्छ।
बीएमआई गणना गणना धेरै सजिलो छ। यो गर्न, किलोग्राममा तपाईंको वजनको मान लिनुहोस् र उचाइमा (मीटरमा) मा विभाजित हुन्छ। उदाहरणको लागि, चलो एक महिला को 1.7 मीटर को उचाई र 58 किलोग्राम को एक सामान्य वजन गरौं। सुरु गर्नका लागि, चलो विकास गर्न वर्गको: 1.7 * 1.7 = 2.8 9। अब हामी सजिलै संग BMI निर्धारण गर्न सक्छौं: 58 / 2.89= 20.06।
जब हामीले निश्चित मूल्य पाउनुभयो, यो डिकोडिङ्मा बदल्नको लागि समय हो:
18.5 भन्दा कम। यस्तो संकेतले ठूलो मात्राको कमीलाई संकेत गर्दछ। निस्सन्देह, अक्सर मोटापा संग रोगहरु को संभावना कम से कम छ, तर विभिन्न अन्य विकारहरु लाई प्राप्त गर्ने जोखिम बढ्छ। विशेष गरी, महिलाहरु मा वजन को कमी मासिक धर्म चक्र को एक गम्भीर घर्षण हुन सक्छ, जो बच्चाहरु संग डराउने समस्याहरु मा प्रवेश गर्दछ। यसको अतिरिक्त, त्यहाँ ओस्टियोपोरोसिस पनि हुनसक्छ, पोषक तत्वहरूको खराब पाचन, आदि।
18.5-24.99। यो सबैभन्दा इष्टतम सूचक हो। वजन आदर्श अनुपातमा छ र मानव स्वास्थ्यको खतरा खडा गर्दैन। वजन कम नगर्नु, वा ठीक छ, तर सानो समायोजनको अधिग्रहणको लागि सानो समायोजन स्वीकार्य छ। यो सबै मांसपेशिहरु ऊतक को वजन र शरीर को व्यक्तिगत विशेषताओं मा निर्भर गर्दछ। 30 वर्षको उमेरमा, आदर्श बीएमआई 22-23 हो, त्यसैले माथिल्लो सीमा पुग्दा, यो वजन घटाउन वा यसलाई स्थिर गर्न सोचाइको लायक छ। यदि ग्यासमा कमर 80-949 भन्दा बढी सेन्टिमिटर हो भने, अतिरिक्त वजनको कारण रोगहरू विकास गर्ने जोखिम छ।
25-29.99। यदि बीएमआई गणनाले यस्ता संकेतकहरू देखाउँदछ भने, तपाईं अधिक वजनबाट पीडित हुनुहुन्छ। गर्भनिरोधक रोगहरु को संभावना धेरै पटक बढ्छ। अधिक सही स्वास्थ्य जोखिम को स्तर को निर्धारण गर्न को लागि, आफ्नो कमर को माप। वजन प्राप्त गर्न रोक्नुस् र अधिशेषबाट छुटकारा पाउनको लागि चाँडै प्रयास गर्नुहोस्। 27-28 को बीएमआई संग, पुरुष र महिला दुवै उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्तै बीमारियों को विकास मा एक नाटकीय वृद्धि छ।
30-34.99। त्यस्ता तथ्याङ्कहरू प्रथम डिग्रीको मोटापाको उपस्थितिलाई संकेत गर्छन्। मोटापा एक रोग हो जुन शरीर मा फैट कोशिकाओं को एक उच्च सामाग्री संग न केवल सम्बन्धित छ, तर पनि हृदय को गंभीर समस्याहरु को संभावना संग। साथै, यो वजनको साथ, मधुमेह र उच्च रक्तचाप विकास गर्न सक्छ। जोखिम कमर संग बढ्छ। यस अवस्थामा, मानिसहरू तुरुन्तै वजन घटाउनैपर्छ, किनकि बीएमआईमा अलि कम कमीले स्वास्थ्य सुधार गर्नेछ।
35-40। सूचक पर्याप्त छ र दोस्रो डिग्रीको मोटापाको बारेमा संकेत गर्दछ। सह-विक्षिप्तताहरू प्राप्त गर्न को लागी समय भन्दा पहिले नै मृत्यु भएको कारण धेरै बढेको छ। यो आवश्यक तुरुन्त आहारको पुन: संशोधन गर्न अनि सबै अनावश्यक बाट बहिष्करण गर्न आवश्यक छ।
थप 40. सूचक 40 भन्दा बढि एक गम्भीर समस्याको बारेमा बोल्छ - तेस्रो डिग्रीको परिचितता। यो वजनको साथ, तपाईंको जीवनको अवधि महत्वपूर्ण छ। कम्तीमा एक किलोग्राम 20-30 गुमाउने यो सिफारिश गरिएको छ।
यो केवल BMI गणना गर्न पर्याप्त छैन र समस्याको उपस्थिति निर्धारण गर्न को लागी, किनकि यदि केहि परिवर्तन भएन, साथमा रोगहरु शरीर को सुरक्षा को कमजोर गर्न को लागी शुरू हुनेछ, जो जीवन मा काफी कम हुन्छ।
सबैभन्दा पहिला, एक डाक्टरलाई परामर्श लिनुहोस् जसले तपाईंको लागि एक निश्चित आहार उठाउनेछ। स्वस्थ खाना र एक मध्यम मात्रामा क्यालोरीको प्रयोगले तपाईंलाई खतरनाक फैटी जम्माबाट मुक्त गर्न अनुमति दिन्छ। यसबाहेक, शरीर सफा हुनेछ र छाला र कपाल समस्याहरू हराउनेछन्, निन्द्रा सामान्यतया हुनेछ, थकानको भावना बिहान मा गायब हुनेछ।
शरीरमा बोसोको प्रतिशत निर्धारण गर्न यो पनि वांछनीय छ। यदि तपाईं बीएमआई आफैलाई गणना गर्न सक्नुहुन्छ भने, त्यसपछि वोसो ऊतकको मात्रा केवल विशेष उपकरणहरूद्वारा निर्धारण गर्न सकिन्छ। सामान्य वजन भएका व्यक्तिहरूमा, वसा सामग्री 15-20% पुरुषहरु र 25-27% महिलाहरुको लागि हो। यो ध्यान राख्नु पर्छ कि एथलीटहरूमा यी तथ्याङ्कहरू कम से कम 5-7% सम्म कम हुन्छ। मोटाई संग, महिलाहरु को लागि वसा ऊतक को प्रतिशत 30% र महिलाहरु को लागि 35% देखि अधिक छ। 55% र माथिको सूचक मोटापाको तेस्रो चरणलाई संकेत गर्दछ।
अब तपाईलाई BMI गणना गर्ने बारे थाहा छ, यो आफैलाई एकसाथ टाढा र आफैलाई स्वास्थ्य र सौन्दर्य दिनुहोस्!
को psycho-स्नायविक क्लिनिक, यसको उद्देश्य, सुविधाहरू देखि प्रहरी प्रमाणपत्रहरू र तयारी को विधिहरू
किन नागफनी को tincture लागू
स्तन कति वर्ष लाग्छ र यसको शल्यक्रिया नगरी बढ्न सक्छ
रेलवे अस्पताल (साराटोभ): विवरण
यस नवजात र वयस्क (फोटो) मा Mongoloid स्थान
Sinusitis: यो के हो र कसरी यो उपचार गर्न?
बेल्ट मोटा तस्वीर कसरी embroider गर्न
यसको स्थापना मा प्लास्टिक बक्स को आकार र दृढ कसरी चयन गर्न
जर्मन काचिन अभिनेता: जीवनी, परिवार, Filmography र रोचक तथ्य
निलम्बित शौचालय: मोडेल, आकार र स्थापना। मर्मत शौचालय hinged
ठोस mixers: समीक्षा र चयन मापदण्ड
महिला रोग। डिम्बाशय cysts कस्तो व्यवहार गर्ने?
"घाँटी बसिरहेका" - बुझ्न कसरी? इतिहास र प्रयोग को एक उदाहरण
बचेराहरूलाई Swallows: वृद्धि र विकास को ढाँचाहरू
मा 2015 नयाँ संग्रह मा महिलाहरु को लागि फैशन जूता
1147 - मास्को को विकास को लागि उमेर के हो?
चिसो मौसमको लागि मूल मैनीक्योर कसरी बनाउने